Indawo yokuhlala engasetyenziswayo - I-Airbnb
Indawo yokuhlala engasetyenziswayo
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguHorizon
Singusapho lwamalungu ayi-4 eTansen, idolophu encinci entle eNepal. Siye savula ikhaya lethu kwiindwendwe ukususela ngo-2011. Kwaye siyakuthanda ukwamkela iindwendwe ezivela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi kwaye zimamele amabali azo zize zibalisele eyethu. Sinamagumbi ayi-4 eendwendwe ekhayeni lethu. Iindwendwe zinokutya kunye nathi zize zifunde Nokupheka KwaseNepali noJanaki. Ukuba uya ePokhara, eLumbini, eBardia, eTansen ingakufanelekela ibe iminyango yethu isoloko ivulekile kuwe.
Wamkelekile kwi-Homestay e-Tansen, Hlala nentsapho yethu uze ufunde ngendlela yokuphila nenkcubeko yase-Nepali. Sisoloko sikuvuyela ukubuka iindwendwe ezivela kwiindawo ezahlukeneyo. Indlu yethu ithule kwaye inokuthula inamagumbi acocekileyo nelingenasici anethoyilethi yondwendwe. Sine-shower eshushu kunye neWiFi ekhawulezayo. Kwibhalkhoni yethu, ungabona ubuhle bedolophu kunye neenduli.
I-Tansen sisixeko esihle. Ekubeni siphezulu esixekweni ungabona yonke idolophu ukusuka kwibhalkhoni. Ukonakala kakuhle nyhani yaye kungena umoya ococekileyo ngalo lonke ixesha. Isisixeko sakudala eNepal esidume ngemveliso nemozulu yasekuhlaleni.
Umbuki zindwendwe ngu- Horizon
Elinye ilungu lentsapho liza kuba sekhaya ngalo lonke ixesha. Ungasoloko unxibelelana nathi. Siyakuvuyela ukwabelana ngamava.